जोगाएन साख ‘नम्बर एक’ ले « नेपाली मुटु
« चुरोट दिए, सलाई लुकाए/एसएलसीको परीक्षाफल प्रकाशित
हार्दिक अनुरोध »
जोगाएन साख ‘नम्बर एक’ ले
धेरैको आशा थियो यसपालीको विश्वकप ब्राजिलले उठाउँने छ । ब्राजिललाई समर्थन गर्नेको त कुरै अर्को । काका काका त यत्ति भन्थे कि मानौ ब्राजिलका काका साख्खै १३ दिने काका हुन् । तर, ब्राजिलको खेल हेरेर आफ्नो रोजाईको टिमले हार्ला भनेर डराउँनेको संख्या पनि कम थिएन । अब त्यो सबै इतिहास भएको छ । पाँच पटकको विश्वकप विजेता फिफा बरियताको प्रथम मुलुक विश्वकपको क्वाटरफाईनलबाट बाहिरिएको छ ।
के बोलुन् काका !!! हार पछिको मौनता
आज भएको खेलमा ब्राजिल युरोपेली मुलुक नेदरल्याण्डसँग 2-1 ले पराजित भएको छ । कति ब्राजिल मात्रले जित्नु नयाँ र राम्रो खेल्ने पनि खेल जित्नु पर्छ भन्ने ठानेर मैले नेदरल्याण्डको पक्ष लिएर खेल हेरे । तर ब्राजिलको जितमा रमाउँन बसेकाहरुको खुसी पहिलो हार्फ भरि नै उत्सकर्षमा थियो ।
खेलको १० औ मिनेटमा रोबिन्होले गोल गरे पछि ब्राजिलले खेलमा एक गोलको अग्रता लियो । तर दोस्रो हार्फमा ब्राजिलियन खेलाडी फेलिप मेलोले ५३औ मिनेटमा आत्मघाती गोल गरे पछि खेल बराबरीमा पुग्यो ।
यो खुसीको कुनै सिमाना होला त ?
दोस्रो तथा विजयी गोल ६८ औँ मिनेटमा स्नाइडरले गरे। आत्मघाती गोल गरेका ब्राजिलका मेलो खेलको ७३ औ मिनेटमा रातो कार्ड खाएर बाहिरिए पछि ब्राजिल त्यसपछिको खेल समयमा नेदरल्याण्डको दबाबमा रह्यो । र, विश्वकपबाटै बाहिरियो ।
उडायो सपना सबै हुरीले । ब्राजिलका एल्भेस
यो जितसँगै नेदरल्याण्डको फाईनल पुग्ने सम्भावना बढेर गएको छ । नेदरल्याण्डले सेमीफाइनलमा घाना वा उरुग्वेको सामना गर्नै छ ।
को बढि खेल्यो ? नेदरल्याण्डका रोबेन
बशंबादका बिरोधमा दुबै टिमका खेलाडीहरु एक साथ उभिएका थिए ।
समानताका लागि हामी एक छौ ।
This entry was posted on July 3, 2010 at 12:17 am	and is filed under विश्वकप बिशेष. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.